ဒုသမ္မတဟောင်း ဂျိုးဘိုင်ဒင် နှင့် သမ္မတထရမ့်
အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပဖို့ ၁၅ ရက်ပဲ လိုတော့ချိန်မှာ ကြိုတင်မဲပေးခဲ့သူပေါင်းက သန်းနဲ့ချီရှိနေပါပြီ။ တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ကောက်ယူတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲစစ်တမ်း မှာတော့. ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကနေ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် ဂျိုးဘိုင်ဒင်က ရီပတ်ဘလစ်ကင်ပါတီက သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ထက် လူကြိုက်ပိုများနေတာ တွေ့ရပါတယ်။
ဒုသမ္မတဟောင်း ဂျိုးဘိုင်ဒင်က သမ္မတထရမ့်ထက် ၉ မှတ် ဒါမှမဟုတ် ၁၀ မှတ် လောက် သာနေတယ်လို့ စစ်တမ်းတွေမှာ ဖေါ်ပြနေပေမယ့် သမ္မတထရမ့်ကတော့ ဒုတိယသက်တမ်းအတွက် သူပြန် အရွေးခံရမယ်လို့ ယုံကြည်ထားဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနှစ်တော့ ထူးထူးခြားခြားပဲ ကြိုတင်မဲပေးခဲ့သူပေါင်းက ၂၈ သန်း နီးပါးရှိနေတာပါ။ အခုလို ကြိုတင်မဲ ပေးရတာ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်း လက်ရှိဖြစ်ပွါးနေတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကပ်ရောဂါ ကြောင့် နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက် ရွေးကောက်ပွဲမဲပေးတဲ့ နေ့ကျရင် မဲရုံတွေမှာ တခြားမဲလာပေးသူတွေနဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုကို ရှောင်ရှားချင်တာကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း မဲပေးသူတချို့က ပြောပါတယ်။
တချိန်ထဲမှာပဲ ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီဝင် တချို့က သူတို့ဟာ သမ္မတထရမ့်ကို ဖြုတ်ချဖို့ အရင်ဆုံး လုပ်ချင်တာကြောင့် အခုလို ကြိုတင်မဲပေးတာလို့ ပြောကြသလို ရွေးကောက်ပွဲ ဆန်းစစ်လေ့လာသူတွေကတော့ ရီပတ်ဘလစ်ကင် အများစုက အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ ပုံမှန် လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အတိုင်း ရွေးကောက်ပွဲနေ့ ရောက်မှသာ လူကိုယ်တိုင် မဲပေးမယ်လို့ ကြေညာထားကြတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကလည်း ရွေးကောက်ပွဲအကြိုစစ်တမ်းတွေမှာ ထရမ့်က ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီက Hillary Clinton ထက် လူကြိုက်နည်းပေမယ့် Pennsylvania, Michigan နဲ့ Wisconsin အပါအဝင် အကြိတ်အနယ်ယှဉ်ပြိုင်ရတဲ့ ပြည်နယ်တွေမှာ မဲဆွယ်မှုတွေ အပြင်းအထန် လုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် အနိုင်ရခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် ပြုလုပ်တဲ့ တတိယအကြိမ် သမ္မတလောင်း ၂ ဦးရဲ့ စကားစစ်ထိုးပွဲကို ကြာသပတေးနေ့မှာ ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပြီး ဂျိုးဘိုင်ဒင်က ဒီစကားစစ်ထိုးပွဲ အတွက် ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်ဖို့ တနင်္လာနေ့မှာ မဲဆွယ်ပွဲမလုပ်ပဲ နားထားပေမယ့် သမ္မတထရမ့်ကတော့ Arizona ပြည်နယ် က မြို့ ၂ မြို့မှာ မဲဆွယ်ပွဲကျင်းပဖို့ သွားရောက်နေပါတယ်။
စဈတမျးတှအေရ Biden က Trump ထကျ အသာစီးရနေ
အမရေိကနျသမ်မတရှေးကောကျပှဲ ကငျြးပဖို့ ၁၅ ရကျပဲ လိုတော့ခြိနျမှာ ကွိုတငျမဲပေးခဲ့သူပေါငျးက သနျးနဲ့ခြီရှိနပေါပွီ။ တနိုငျငံလုံး အတိုငျးအတာနဲ့ကောကျယူတဲ့ ရှေးကောကျပှဲစဈတမျး မှာတော့. ဒီမိုကရကျတဈပါတီကနေ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမယျ့ ဂြိုးဘိုငျဒငျက ရီပတျဘလဈကငျပါတီက သမ်မတဒျေါနယျထရမျ့ထကျ လူကွိုကျပိုမြားနတော တှရေ့ပါတယျ။
ဒုသမ်မတဟောငျး ဂြိုးဘိုငျဒငျက သမ်မတထရမျ့ထကျ ၉ မှတျ ဒါမှမဟုတျ ၁၀ မှတျ လောကျ သာနတေယျလို့ စဈတမျးတှမှော ဖျေါပွနပေမေယျ့ သမ်မတထရမျ့ကတော့ ဒုတိယသကျတမျးအတှကျ သူပွနျ အရှေးခံရမယျလို့ ယုံကွညျထားဆဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒီနှဈတော့ ထူးထူးခွားခွားပဲ ကွိုတငျမဲပေးခဲ့သူပေါငျးက ၂၈ သနျး နီးပါးရှိနတောပါ။ အခုလို ကွိုတငျမဲ ပေးရတာ အမရေိကနျနိုငျငံတှငျး လကျရှိဖွဈပှါးနတေဲ့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကပျရောဂါ ကွောငျ့ နိုဝငျဘာလ ၃ ရကျ ရှေးကောကျပှဲမဲပေးတဲ့ နကေ့ရြငျ မဲရုံတှမှော တခွားမဲလာပေးသူတှနေဲ့ ထိပျတိုကျတှဆေုံ့မှုကို ရှောငျရှားခငျြတာကွောငျ့ ဖွဈကွောငျး မဲပေးသူတခြို့က ပွောပါတယျ။
တခြိနျထဲမှာပဲ ဒီမိုကရကျတဈ ပါတီဝငျ တခြို့က သူတို့ဟာ သမ်မတထရမျ့ကို ဖွုတျခဖြို့ အရငျဆုံး လုပျခငျြတာကွောငျ့ အခုလို ကွိုတငျမဲပေးတာလို့ ပွောကွသလို ရှေးကောကျပှဲ ဆနျးစဈလလေ့ာသူတှကေတော့ ရီပတျဘလဈကငျ အမြားစုက အမရေိကနျပွညျထောငျစုရဲ့ ပုံမှနျ လုပျရိုးလုပျစဉျအတိုငျး ရှေးကောကျပှဲနေ့ ရောကျမှသာ လူကိုယျတိုငျ မဲပေးမယျလို့ ကွညောထားကွတယျလို့ ပွောပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ ရှေးကောကျပှဲတုနျးကလညျး ရှေးကောကျပှဲအကွိုစဈတမျးတှမှော ထရမျ့က ဒီမိုကရကျတဈပါတီက Hillary Clinton ထကျ လူကွိုကျနညျးပမေယျ့ Pennsylvania, Michigan နဲ့ Wisconsin အပါအဝငျ အကွိတျအနယျယှဉျပွိုငျရတဲ့ ပွညျနယျတှမှော မဲဆှယျမှုတှေ အပွငျးအထနျ လုပျခဲ့ပွီးတဲ့နောကျ အနိုငျရခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
ရှေးကောကျပှဲမတိုငျခငျ ပွုလုပျတဲ့ တတိယအကွိမျ သမ်မတလောငျး ၂ ဦးရဲ့ စကားစဈထိုးပှဲကို ကွာသပတေးနမှေ့ာ ကငျြးပမှာ ဖွဈပွီး ဂြိုးဘိုငျဒငျက ဒီစကားစဈထိုးပှဲ အတှကျ ပွငျဆငျမှုတှေ လုပျဖို့ တနင်ျလာနမှေ့ာ မဲဆှယျပှဲမလုပျပဲ နားထားပမေယျ့ သမ်မတထရမျ့ကတော့ Arizona ပွညျနယျ က မွို့ ၂ မွို့မှာ မဲဆှယျပှဲကငျြးပဖို့ သှားရောကျနပေါတယျ။